Wensimbi transformers asetshenziswa RPA ukuhlaziywa izifunda amanani amanje nawesikhathi voltage. Lokhu kuyadingeka ukuze sidlulisele isikhathi isivikelo wayegila ngokuvumelana setpoint, unjiniyela kagesi ngesikhathi nokuthuma. Ngokuvamile, izifunda asetshenziswa RPA yokulinganisa transformers wamanje kanye voltage. Ake sicabangele uhlobo ngalunye ngokuhlukile.
Voltage transformers zisetshenziselwa ukuvikela ua lolu hlobo ukwesekwa, esiqhutshwa mayelana countdown isigaba shift engeli futhi ihlelwe isivikelo emhlabeni iphutha ngosizo ohlobo zixhunywe unxantathu isikimu evulekile.
Ukulinganisa voltage transformers abazenzi nge Kern eziningana: eyodwa ixhunyiwe "inkanyezi" iphethini, kwesibili - kwi "delta ile". Namuhla, izitshalo yokukhiqiza ukukhiqiza transformers ne Punch lwesithathu, esetshenziselwa ezimali.
Ukuze RU-35-110 kV efakwe ezintathu -phase transformer voltage. Ukuze iqembu compounds ngabanye ngayinye inamathele imishini. Ukuze RU 6-10 kV ngokuvamile isetshenziselwa ezintathu okhombisa TN in iphasela single.
Ukulinganisa transformers zamanje asetshenziswa kuzozonke Uzbekistan futhi osungulwe ngendlela yezigaba. Lezi Transformers zenziwa amathayi Monolithic, okuyinto iseli eyinhloko. Bus fixed yesibili emazombezombe uya khona, kungase kube eziningana, ngayinye emazombezombe (lapha core) yakhelwe isigaba ezithile ukunemba namandla athile.
Cores kukhona okuphumayo sokuvikelwa wesifunda, Kukala, kwakha metering. Kubalulekile ukuthi transformers zamanje akakaze kwadingeka core raskorochennyh, kungenjalo ikhoyili uyozishisa futhi abasebenzi usengozini yokuba electrocution wamshaya.
Uma ufaka yokulinganisa transformers zamanje kumele imiswe ngokuvumelana umdwebo okokufaka-okukhipha voltage (L1 - okokufaka A2 - isivuno). Kuleli kuncike le zithwala isiqondiso samanje isigaba ngasinye. Ngokwe-ngomqondo ongokoqobo, phakathi zithwala of imisinga, okuyinto Windings axhunyiwe ku "inkanyezi" kumelwe degrees 120. Uma ngasizathu simbe zithwala ahlelwe ngendlela ehlukile, kufanele ushintshe TT uxhumano nengaphakathi swapping ekuqaleni kuze kube sekupheleni.
Transformers yamanje asetshenziselwa isivikelo izifunda okufutshane futhi inhlangano ukuvikelwa umehluko. Ukulinganisa transformers wamanje - Imfanelo ebaluleke ngokufakelwa kukagesi yesimanje, it is a inzwa, elinganisa Inani lamanje nokuhamba kwawo.
Transformer kagesi isetshenziswa iqanda ukulandelana. Lo msuka ezifanelekile RU-0,4-6-10 kV, kusukela umsebenzi transformer (ku Ungalokothi ekhaya) ukuvikela wesifunda high voltage phansi iphutha. iseli yakhe eyinhloko yokuza emhlabeni - kuyisipho Element, okuyinto badabula bagel. Kusukela yesibili ukubaluleka kuhoxiswe okuyinto buyehluka kuye ushintsho amandla kazibuthe Element.
Ngakho, i-transformer wokulinganisa wamanje kanye voltage - kuyisisekelo Ukuvikelwa. Ngabo microprocessors yanamuhla kungenzeka ngokuzimela ukubala amandla, ukumelana esigabeni uchungechunge, engele phakathi wamanje kanye voltage. Okutholakele akudingeki ihlolwe, njengoba imishini yesimanje Kwenziwa ubuchwepheshe bamuva.
Namuhla, ngempela idivayisi ethandwa, okuyinto yisisombululo okuphelele futhi zihlanganisa wesifunda amadlambi, disconnectors, kanye esakhelwe transformers wamanje kanye voltage - akuve elula futhi inzuzo ngempela.